Chartist manhamba: maitiro ekutengesa pamusika wemari? | Ehupfumi Zvemari
Imwe yemaitiro ekushanda mumisika yemari inogadziriswa kuburikidza neaya anonzi machati manhamba. Ivo vanogona kukupa iwe isinganzwisisike chiratidzo yeakakosha kukosha kuti upinde uye ubude mumisika yemari. Chero zvazvingaitika, iri sisitimu yakachengeterwa yakasarudzika nhoroondo yevarimi. Vari sei avo vanopa kuenderera mberi nekudzidza mukirasi ino yekushanda. Pamusoro pehumwe hunyanzvi hwekufunga hunogona kupihwa pachena kuchengetedzeka.
Iwe haugone kukanganwa kubva ikozvino pane iyo chati yekuongorora ndiyo chikamu chehunyanzvi kuongorora iyo inofunda kufamba kwemitengo. Uku ndiko kukosha kwaro nhasi kuti zviyero izvi ndizvo zvinoita mitengo uye izvo zvinoita kuti hurongwa hwekudyara uhwu hunzi charism. Asi ikozvino, nhamba yega yega ine zvirevo zvakasiyana uye ivo vanoshanda kuyambira kana iwe uri kutarisana neicho chepamusoro maitiro kana kana pakapesana icho chiri pasi. Iyi ndiyo imwe yemakiyi ekududzira iyi kirasi yemasheya emusika wemasheya.
Kune rimwe divi, manhamba echati akakoshawo kwazvo mukuona kana chiito chakasimba chichaenderera mberi kana pangave neshanduko mariri. Vashandi vane ruzivo rwakanyanya mumisika yezvemari vanotarisa paramende iyi kuvhura kana kuvhara nzvimbo mumisika yemari. Uine ongororo yakadzama yeiyi ongororo unogona kumisikidza iyo kubudirira kwemaitiro ako. Pamusoro pemamwe marongero anoonekwa seasina kusimba kana, zvirinani sekusavimbika mune kwavo kuongororwa.
1 Chartist manhamba: ane akati wandei matatu
2 Anowedzera matatu
3 Chii chinonzi wedges?
4 Pullback uye Throwback
5 Pullback: zvinopesana
6 Kana nhamba idzi dzikatyoka
Chartist manhamba: ane akati wandei matatu
Iwo mativi matatu mukirasi ino yemashamba yemasheya manhamba ndeimwe yeakanakisa sosi yeruzivo yekuita mashandiro pamusika wemasheya. Icho chimwe chezvakanakisa masosi ekuti uone kana chengetedzo yakanyudzwa mune yepamusoro kana kana nekupesana nayo iri yemabhureki. Imwe yematatu matatu akarurama anonzi sekukwira. Asi iyi modality yekuongorora kwehunyanzvi ine chii? Zvakanaka, iyo inoumbwa nemutsetse wekumira unopokana uye nhungamiro yekusimudzira. Kuvimbika kwayo kwakanyanya kukwirira uye kunogona kuiswa pasina kunetseka nekuti zviri nyore kuti uzvione pamwe nekureruka.
Kune rimwe divi, mamwe emakona matatu akakosha mukuongorora kwehunyanzvi akasiyana. Ndokunge, iye achidzika. Mune tambo yakatwasuka inoumbwa kuti mune ino kesi inoshanda sekutsigira uye ne bearish nhungamiro. Kazhinji, rudzi urwu rwechimiro runowanzoenda pasi, zvinoreva kuti nzira zhinji dzekuchengetedza dzinofanirwa kutorwa kana uchigamuchira uyu mufananidzo. Kunyanya kana rutsigiro urwu rwakagogodzwa pasi neumwe musimbe. Mupfungwa iyi, yakafanana zvikuru neyakajairwa midhiya mukumisikidzwa kwemitengo yayo.
Yetatu netriangle ndiyo yakawedzera uye zita rayo ratoratidza chimiro chakanakira zvido zvevashambadzi vadiki nepakati. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iyi yakasarudzika uye panguva imwecheteyo yakaoma nhamba yekuongorora kwehunyanzvi inowanzo kubuda mukati pinda. Hazvishamisi kuti izvo zvavanouya kuzoratidza kuwedzera kukuru mukusagadzikana. Ndokunge, musiyano wakakura pakati pemitengo yakakwira uye shoma yemasevhisi akaongororwa. Kusiyana nedzimwe nhamba, zviri shure kwezvose hazvipe chero chinangwa chakanangana.
Dambudziko rakakura nemufananidzo uyu mumisika yemari ndeyekuti haigone kuturikirwa muchimwe chiitiko. Chero chiitiko chinogona kuitika kana chii chakafanana, mucherechedzo kumusoro, pasi kana kunyangwe lateral maitiro. Neimwe nzira, inofanirwa kuenda isingazivikanwe nekuti haipe chero chiratidzo chakavimbika nezve izvo zvaunofanirwa kuita nguva dzese. Kusvika padanho rekuti vashoma vashoma vanoita hanya nazvo, kunyanya avo vane ruzivo rwakawanda mumisika yemari.
Chii chinonzi wedges?
Kunyangwe ini ndakusuwa zvishoma panguva ino ma wedges ari kumwe kuumbwa kwetatu. Nekuti zvirizvo, zvinowirirana neyakambopfuura mamodheru pakuti iwo mativi matatu. Asi mune ino kesi, uchiratidza imwecheteyo kero. Nedudziro yakapetwa kaviri kubva pakukwira wedge kunopa yakajeka bearish zvirevo. Nepo pane izvo zvinopesana, iyo inodonha wedge ine inowedzera kukosha. Semhedzisiro yedudziro idzi, iwo mafambiro anogona kushandiswa kutenga kana kutengesa zvikamu, zvichiteerana. Iine huchokwadi hwakavimbika mukugadziriswa kwayo.
Kune rimwe divi, dambudziko hombe neaya akakosha wedges, ese ari maviri ekukwira nekudzika akasiyana, ndeyekuti iwo haasi akaomesesa kuona. Mushure mezvose, zvakakosha kupa iyo nhanho yepamusoro yekudzidza mune ino kirasi yezviverengero mukati mechartism kana tekinoroji kuongororwa. Asi vakagadzirisa dambudziko iri, ivo vanokwanisa kukupa unopfuura mufaro mumwe kubva zvino zvichienda mberi. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti iwe unenge uri muchimiro chiri nani kuita kuti kuchengetedza kwako kubatsire kubva ikozvino.
Pullback uye Throwback
Hapana mubvunzo kuti tiri kutarisana nemaviri emafambiro anonyanya kushandiswa nevashambadziri kuti vaite mabasa avo mumisika yemari. Kunyangwe chiri chokwadi zvakare kuti ivo vanowanzo kuve vanovhiringidzika neakasarudzika maficha. Neichi chikonzero, zvinonyanya kukosha kuti zvisiyane nemazvo. Huye, iko kunonzi kukanda kumashure ndiko kufamba kumashure mushure me kuputsika kwepamusoro. Ndokureva, iyo inotangisa nzira yekugadzirisa chaiyo mushure mekusimudzira kwakakura mumitengo yayo. Kumira padhuze nekupokana.
Inowanzo iine simba rakasimba rekusimudzira saka rinofanirwa kushandiswa kutora zvinzvimbo nenzira ine hukasha. Hazvishamisi kuti inopa mukana wekuongorora wakakodzera kufunga nezvazvo. Kusvika padanho rekuti iko kukurumidza kuita ndeye a kupukunyuka zvine chisimba zvakanyanya kumusoro. Pakutanga, kudzoreredza mitengo yavo yapfuura uye nerombo rakanaka uye huwandu hwakakura hwezvibvumirano, zvinangwa zvakanyanya kuda kuzadzikiswa zvinogona kuzadzikiswa nevashambadzi vadiki nepakati vakasarudza kutora chinzvimbo pakutanga kwekufamba kwemusika wemasheya .
Kune rimwe divi, iyo yekudzosera kumashure inoratidza inopesana neyekare chimiro. Ndokunge, ine yakasimba kwazvo bearish zvinoreva. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nenyaya yekuti mumusika wemasheya ongororo yehunyanzvi, inoreva mafambiro ekudzoka kana kudzoreredzwa mumutengo (kumusoro kana pasi) kuenda kune yakapfuura kufamba kwekuparara kwezvitsigiro, kuramba, kwakakosha maitiro kana graphical kana chartist mafomu izvo zvakapedzwa kare. Naizvozvo, iwo mikana yekutenga kana kutengesa chengetedzo, zvinoenderana nekuparara kwenzvimbo yekutengesa kana yekusimudzira kana yehunyanzvi hunyanzvi hwekuumbwa.
Chero zvazvingaitika, imwe yemakiyi ekuchengetedza kana kuwana kubudirira mumabasa zvinoenderana nekuziva nzira yekuparadzanisa mafambiro ese ari maviri, izvo zvisiri nyore nguva dzose kuratidza. Kana iwe usina kunyatso kujeka nezve iyi nzira yekuongorora kwehunyanzvi, zvingave zvirinani kurega kuita chero sarudzo pamusoro pehunhu hwaunoda. tenga kana kutengesa kubva zvino zvichienda mberi. Kwete zvisina maturo, iwe unogona kuwira mukukanganisa kusinganzwisisike uko kuchabhadhara zvakanyanya, sezvakaitika nevazhinji vevatengesi vasina ruzivo rwakanyanya mumisika yemari.
Pane zvinopesana, usakanganwa kuti kudzoka hakuitike nguva dzese patambo yemaitiro painotyoka. Kwete zvakanyanya kushoma kunyangwe kana varimi vachifunga nenzira iyi. Sezvo imwezve chiratidzo chinodikanwa kuti isimbise kusimba kweiyo nyowani mamiriro ayo achangotanga panguva iyoyo. Ichi ndicho chikonzero chikuru nei ichifanira kutsigirwa nemhinduro inobva mamwe marongerwo emusika wemasheya. Nekuti pakupera kwezuva, kana ichi chimiro chehunyanzvi chekuongorora chikaunzwa, iwe unofanirwa kuratidza imwe yambiro nezve zvaunofunga.
Kana nhamba idzi dzikatyoka
Chimwe chinhu chaunofanirwa kuongorora mukuwongorora kwakaringana kweaya mashamba emusika wemasheya ndicho chine chekuita nenyaya yekuti mune chero rudzi rwechiyero chemifananidzo (mativi matatu, matenderedzwa, pfudzi-musoro-pfudzi, pakati pevamwe inonyanya kukosha) inogona kuburitsa kudonhedza kana ichi chimiro chikatyoka. Naizvozvo, kuoma kwayo kuri kuwedzera zvine musoro, sezvaungaona pamwe netsananguro idzi dzatiri kukupa. Kusvika padanho rekuti inogona kunzi iko kudhonza kwakagadzirwa mushure mezvose sekusimbiswa kwechokwadi kwesangano. Beyond kumwe kufunga, zvese kubva kune tekinoroji yekutarisa uye kubva kune ayo akakosha.
Nepo chimwe chikamu, zvakare zviri nyore kwazvo kuti iwe utarise kubva zvino zvichienda mberi kuti aya manhamba haatadzike. Ndokunge, anogona kuve mafambiro enhema anogona kukutungamira mukuita zvisirizvo uye iyi ndiyo njodzi huru yauinayo kana ukashandisa ma parameter mune ruzivo kuti ushande mumisika yemari. Nekuti hapana mubvunzo kuti iwe unogona kusiya akawanda ma euro munzira kana zviito zvako zvisina kunaka. Ndiyo njodzi huru yekushandisa aya manhamba atataura nezvawo muchinyorwa chino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Chartist manhamba: maitiro ekutengesa pamusika wemari?